Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. झपाका १० प्रतिशत बालबालिका नियमित खोपबाट बञ्चित – Emountain TV
झपाका १० प्रतिशत बालबालिका नियमित खोपबाट बञ्चित
झापा, २२ बैशाख । झापा जिल्लालाई २०७५ बैशाख भित्र पूर्ण खोप जिल्ला घोषणा गर्ने भनिए पनि अझै चार वटा स्थानीय तहमा खोप अभियानले पूर्णता पाउन सकेको छैन । झपाका १० प्रतिशत बालबालिका अझै नियमित खोपबाट बञ्चित छन् । ८ नगरपालिका र ७ गाउँपालिका गरी कुल १५ स्थानीय तह रहेको झापामा चारवटा स्थानीय तहका खोप अभियानले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
हालसम्म नेपालका जम्मा ४२ जिल्ला मात्र पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणा भएका छन् । स्वास्थ्य सेवा विभाग वाल स्वास्थ्य महाशाखाका अनुसार अझै पनि तराइका अधिकांश जिल्ला खोपयुक्त जिल्ला घोषणा हुन सकेको छैन । अझै नेपालका २२ प्रतिशत बालबालिका खोपसेवाबाट बञ्चित छन् ।
झापा जिल्लालाई पनि २०७५ पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने बताइए पनि अझै १० प्रतिशत बालबालिका खोपसेवाको पहुँचबाहिर छन् । झापाका मेचीनगर, बिर्तामोड र दमक नगरपालिका तथा गौरिगञ्ज गाउँपालिकामा खोप अभियानले पूर्णता पाउन सकेको छैन । अशिक्षा र जनचेतनाको कमिका कारण खोप लगाउने समयमा अविभावकले बच्चा नल्याएको कारण बालबालिका खोपबाट बञ्चित हुने गरेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको भनाइ छ ।
झापामा ९१ हजार ७ सय ३७ जना ५ बर्ष मुनिका बालबालिका छन् । जस मध्ये १० प्रतिशत बालबालिका खोपसेवाको पहुँच बाहिर छन् । सबै बालबालिकालाई खोप लगाउन स्थानीय स्तरमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जरुरी छ ।
कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा सबैका लागि शिक्षा भन्ने सरकारी नारा अन्योलमा: शिक्षाविद्
नेपाली भाषा र संस्कृतिको संरक्षण गर्न उपराष्ट्रपति पुनको आग्रह
प्रमुख अतिथिमा भारतको उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी जनकपुरमा, सुरक्षाका लागि बुलेट प्रुफ गाडीको व्यवस्था
आज माउन्टेन र बिजनेस प्लस टेलिभिजनको वार्षिक उत्सब